Kitapo fitiliana antigen Covid-19 antigen Sichuan Yinye Medical Technology Co Ltd.
Sichuan Yinye Medical Technology Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny Global Center of Chengdu, Sichuan Province, Sina. Orinasa teknolojia avo lenta mifantoka amin'ny R&D, famokarana ary fivarotana diagnostika in vitro (IVD) eo amin'ny sehatry ny biomedicine. Izy io dia manolo-tena amin'ny fananganana rafitry ny sehatry ny indostria manontolo momba ny rafitra fitiliana an-tsaina voampanga. Ny lisitry ny vokatra ao amin'ny orinasa dia manarona vokatra mararin'ny diagnostika in vitro toy ny immunodiagnosis, diagnostika molekiola ary fitsapana mikraoba. Manana fanangonana teknolojia lalina sy tombony ara-teknika tsy manam-paharoa amin'ny sehatry ny fizahana homamiadana aloha izy, ny fahitana haingana ireo aretina mifindra ary ny fizahana haingana ireo aretina geriatrika.
Ny vokatra ateraky ny orinasa dia manarona vokatra diagnostika in vitro feno toy ny immunodiagnosis ...
COVID-19 Antigen Detection Kit ho an'ny nasal swab / santionan'ny sputum-fitsapana tena)
Kitapo mamantatra antigen COVID-19 ho an'ny santionany sputum
Kitapo fikarohana Antibody / Antigen an'ny COVID-19
Kitapo fikarohana COVID-19 / Influenza A / Influenza B
● Fanaraha-maso ny kalitao henjana ary alao antoka fa ny tahan'ny fampiasana fitaovana fitsaboana dia mihoatra ny 95%.
● Ny vidin'ny fivarotana mivantana amin'ny orinasa, tsy misy mpaninjara mahazo ny fahasamihafana eo amin'ny vidiny.
● Nandritra ny 20 taona niainany ho an'ny vokatra ara-pitsaboana, Yinye dia nanompo am-pahaizana maherin'ny 30 ny mpanjifa eran-tany.
● Miaraka amin'ny fiantohana kalitao 10 taona hahazoana antoka ny fiaraha-miasa mitohy.
● mpiasa matihanina maherin'ny 130 hanome anao vahaolana feno momba ny vokatra.
HANome anao izahay
Yin Ye dia manana traikefa matihanina mihoatra ny 10 taona ary manolo-tena amin'ny fisorohana ny valanaretina.
Mpiasa matihanina 130+ hanome anao vahaolana feno momba ny vokatra.
Lohateny matihanina mandroso
Anaram-boninahitra matihanina mandroso sy diplaoma doctorat dia mihoatra ny 30% amin'ny ekipan'ilay orinasa.
Aondrana any amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 30 ny vokatra, manampy amin'ny asa fanoherana ny valanaretina any an-toerana.
New-Gene & Yinye dia manana efitrano fidiovana telo kilasy GMP ho an'ny famokarana andrana mikoriana izay manome antoka ny haavon'ny fenitry ny famokarana avo indrindra
Fahaiza-mamokatra avo lenta
Amin'izao fotoana izao, New-Gene & Yinye dia manana mpiasa mpamokatra manontolo andro maherin'ny 500, izay mahazaka famokarana 3.000.000 isan'andro.
New-Gene & Yinye dia manana orinasa roa sy enina famolavolana mandeha ho azy tanteraka izay mampihena ny hadisoan'ny olombelona ary mampitombo ny fahombiazan'ny famokarana
avy amin'ny adminApr-22-2021
NEWGENE dia mahazo fankatoavana fizahan-tena any Belzika sy Suède
COVID-19 Antigen Detection Kit dia nahazo ny fankatoavana ny fizahan-tena avy amin'ny Minisiteran'ny fahasalamana belza (FAMHP) sy ny masoivohon'ny vokatra ho an'ny fitsaboana soedoà (Agency ny vokatra momba ny fitsaboana soedoà). NEWGENE no orinasa sinoa voalohany nahazo ny fankatoavana ny fizahan-tena any amin'ireo firenena eropeana roa ireo, taorian'ny Denmar ...
avy amin'ny adminApr-09-2021
Manoloana ny fangatahana goavana ataon'ny olona 800 tapitrisa any Eropa!
Ny fitsapana antigen an'ny COVID-19 an'ny orinasa sinoa dia nandresy ny "Grand Slam" firenena 15 nahitana an'i Alemana, France, Italia ary Portugal tamin'ny dingana iray! Amin'izao fotoana izao, noho ny fiparitahan'ny virus mutant sy ny anton-javatra hafa, ny valan'aretina COIVD-19 tany amin'ny firenena eropeana maro dia nibolisatra ...
avy amin'ny adminApr-08-2021
Tatitra Manokana momba ny TV an'ny NEWGENE Novel Coronavirus Antigen ao Espana
NEWGENE Novel Coronaavirus Antigen detection vokatra nahazo tatitra manokana momba ny fahitalavitra Espaniola Antena3. Nahazo laza be ny vokatra NEWGENE ary eken'ny besinimaro miaraka amin'ny fahombiazany ambony sy ny ...
Ary miankina amin'ny kalitao tena tsara, ny vidiny mirary, ny serivisy tsara indrindra, nahazo valiny tsara avy amin'ny mpanjifa any ivelany izahay. Nandritra ny taona maro ny serivisy sy ny fampandrosoana tsara, ekipa mpivarotra varotra iraisam-pirenena matihanina izahay.
Izahay dia mifantoka amin'ny antsipiriany rehetra amin'ny fikarakarana lamina ho an'ny mpanjifa mandra-pahazoan'izy ireo vokatra azo antoka sy azo antoka miaraka amin'ny serivisy logistika tsara sy ny vidiny ara-toekarena.
Ny tamba-jotra sy ny serivisy serivisy Yinye medical dia nandrakotra ny faritra rehetra manerantany. Ny tanjon'ny orinasa dia ny "hampivelatra ny bioteknolojia sy ny tombony ho an'ny fahasalaman'ny olombelona".
N5-809, ivon-toerana manerantany, 1700 Tianfu Avenue Avaratra, faritra avo lenta, Chengdu, Sichuan, Sina